१२ वर्षीया बालिकामाथि सामूहिक बलात्कार, आरोपित चारै जना फरार
सप्तरीमा १२ वर्षीया बालिकालाई सामूहिक बलात्कार गरिएकाे घटना सार्वजनिक भएको छ । घटना घटेको एक सातापछि पीडित पक्ष उजुरी लिएर इलाका प्रहरी कार्यालय, कञ्चनपुर आएपछि घटना सार्वजनिक भएको हो ।
दाइ नाता पर्ने किशोरसहित अन्य चार जनाले ती बालिकालाई बलात्कार गरेको खुल्न आएको छ । गाई चराउन जंगल गएकी अग्निसाइर कृष्णसवरण गाउँपालिका–२ की बालिका १८ असारमा बलात्कृत भएकाे परिवारले जनाएकाे छ । मुखमा रुमालले बाँधेर घिस्याउँदै घारीतर्फ लगेर बलात्कार गरेको पीडितले प्रहरीसमक्ष बयान दिएकी छन् ।
पीडितकी आमाले दिएको उजुरी र बालिकाको बयानपछि पीडितको स्वास्थ्य परिक्षण गरी उजुरी दर्ता गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय, कञ्चनपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक मकेन्द्रकुमार मिश्रले बताए ।
आरोपीहरुको उमेर पनि १८, १७, १५ र १२ वर्ष छ। चारै जना आरोपी फरार रहेकोले उनीहरूकाे खोजीकार्य भइरहेको प्रहरीले जनाएकाे छ ।
पारिवारिक दबाबका कारण उजुरीमा दाजुको नाम उल्लेख नगरिए पनि पीडितले बयानमा भने उनको नाम किटानी गरेकी छन् । दाजुबाट नै अन्य आरोपीको नाम खुलेको पीडिततर्फका कानून व्यवसायीले जानकारी दिए ।
पीडितका दाइ नाता पर्ने सबैभन्दा कम उमेर १२ वर्षका छन् । दबाब, अज्ञानता र लोकलाजका कारण पीडित परिवारले घटनालाई लुकाएर राख्दा प्रमाण जुटाउन र दोषी पक्राउ गर्न समस्या भएको प्रहरीको भनाइ छ ।
गाउँ समाजले नै मिलाउने भनी उजुरी गर्न रोक लगाएकोले ढिलो भएको स्वीकार्दै पीडितकी आमाले आरोपितहरु गाउँबाट भागेको बताइन् । सामूहिक बलात्कार घटनाबारे प्रहरीमा उजुरी परेपछि आरोपितको परिवारबाट झनै दबाब बढेको र जीउ ज्यानमा असुरक्षा भएको भन्दै पीडित परिवार सुरक्षा माग्दै बिहीबार सदरमुकाम राजविराज आएकाे छ ।
बालिकामाथि सामूहिक बलात्कारकाे घटना बढेको र अधिकांश घटनामा छिमेकी, चिनजान र आफन्तकै संलग्नता रहेको देखिन्छ ।
पाँच महिनाको अवधिमा सप्तरीमा आठ वटा सामूहिक बलात्कारको घटना भएको प्रहरीको तथ्यांकले देखाएको छ। जसमध्ये १७ जना अझैसम्म फरार छन्। चार जना आरोपी पुर्पक्षका लागि राजविराज कारागारमा थुनामा र दुई जना बाल सुधार गृहमा छन् ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार २७, २०७६, ०३:४८:००
मोदीलाई तामझामका साथ स्वागत गरेको जनकपुर सीबारे मौन !
मन्त्रीको दादागिरी !
स्थानीयको रचनात्मक विरोध : नगरपालिका कार्यालयमा फोहोरको डंगुर
मेलाको विषयमा दुई गाउँबिच झडप हुँदा १६ जना घाइते
प्रहरीले बालक बेच्न खोजेको आरोप लगाउँदै स्थानीय विरोधमा, प्रहरीद्वारा पाँच राउण्ड हवाइ फायर